I-Cottage Ethokomele Enombono Womfula - I-Airbnb
I-Cottage Ethokomele Enombono Womfula
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jeremy
Ikotishi elisanda kulungiswa kahle elinombono omuhle womfula. Ikhaya liwuhambo olulula lwemizuzu eyi-10-15 ukuya enkabeni yedolobha kanye nokuhamba imizuzu emi-5-10 ukuya emakethe yomlimi echumayo yesizini kaCamden. Kukhona uthango oluncane olubiyelwe egcekeni. Leli yikhaya elilungele ukuphumula ngenkathi uqhelelene kalula nakho konke okunikezwa yiCamden Mid Coast Maine.
Indlu iyingxube ephelele yesimanje kanye ne-rustic. Jabulela inkomishi yekhofi kanye nokubuka umfula (Ama-Bald eagles namadada angabonwa njalo) ngenkathi uhlezi endaweni yokudla kwasekuseni noma usonge ngencwadi esofeni elithokomele. I-Crib kanye/noma isihlalo esiphezulu siyatholakala uma ucelwa. Akukho nkokhelo eyengeziwe yabancane. Ayikho ikhebula kodwa kune-roku exhunyiwe ukuze ukwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho ye-Netflix, i-Hulu, noma i-Amazon. Ngaphandle kunendawo yomlilo elungele ukwenza ama-s'mores. Uma ucabangela ukusivakashela ebusika. Amanani amahle futhi i-Camden inikeza okuningi okufanele ukwenze: Ukushushuluza e-Camden Snowbowl, Iviki le-Camden Winterfest, i-U.S. National Toboggan Championships, i-Camden Conference, Isonto Lendawo yokudlela yase-Maine kanye neminye imisebenzi eminingi emihle. Uma ufuna ulwazi olwengeziwe ngale micimbi noma eminye imicimbi ye-Camden insiza enhle yiwebhusayithi ye-Camden Maine Experience. Sifuna ukujabulele ukuhlala kwakho ngakho-ke uma udinga noma yikuphi ukuhluka kulokho esikunikezayo sicela ukhululeke ukubuza futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukuhlalisa.
Indlu itholakala emgwaqeni wezindlu olayini wesihlahla onokubukwa okuhle komfula. Kuyibanga lokuhamba elilula kukho konke uCamden angakunikeza. Uma ungumgijimi sazise futhi singakunikeza imizila emangalisayo yokugijima ezoqhudelana nanoma yimuphi umzila noma yikuphi. Ungagijima ugudle ulwandle noma ugijime kanzima unqamule ama-Camden Hills azungeze iLake Megunticook.
Mina nomkami sihlala emgwaqweni ukuze sibe khona lapho usidinga kodwa uma kungenjalo uzoba nemfihlo yakho. Sihlale sizimisele ukwenza izincomo ngezindawo zokudlela, izindawo esingazivakashela, nezinto okumele zenziwe.